एकभन्दा बढी गर्ल फ्रेन्ड र ब्वाइ फ्रेन्ड बनाउदै हिड्नु सहि हो या गलत? नेपाली युवायुवतीको आयो यस्तो जवाफ [ हेर्नुहोस भिडियो ] - Enepalese.com
एकभन्दा बढी गर्ल फ्रेन्ड र ब्वाइ फ्रेन्ड बनाउदै हिड्नु सहि हो या गलत? नेपाली युवायुवतीको आयो यस्तो जवाफ [ हेर्नुहोस भिडियो ]
इनेप्लिज २०७४ साउन ८ गते ७:५५ मा प्रकाशित
अहिलेको समयमा नेपाली युवायुवतीहरुको प्रेमी प्रेमिका नहुने अवस्था विरलै मात्र भेटिन्छ । समय परिबर्तनशिल छ । सबैको चाहना समयमा नै केहि गरौ अनि भनेको छिटोभन्दा छिटो केहि गरि हालौ भन्ने नै हुन्छ । त्यसमा पनि प्रेमी फेर्ने र प्रेमिका फेर्ने चलन त झन् ब्यापक नै भएको छ ।
भेटेको दुइ घण्टामा लव अनि चार घण्टामा बेक्रअप गर्ने यहि फेशन मौलाएको छ । अझ भनौ चार-पाँच वटा गर्ल फ्रेन्ड र ब्वाइ फ्रेन्ड बनाउने लहर चलेको पाइन्छ ।
यहि सेरोफेरोमा गर्ल फ्रेन्ड र ब्वाइ फ्रेन्ड फेर्दै हिड्ने युवा जमातमाझ पिएनपि रोड सो अन्तर्गत नयाँ एपिसोडमा एकजना भन्दा बढी प्रेमीप्रेमिका बनाउनु सहि या गलत भन्ने बिषय उठाइएको छ । यो रोचक प्रश्नको कस्तो जवाफ दिए त युवायुवतीले ?